Iinqwelomoya zaseTurkmenistan zizimisele uku-odola iBoeing 777-200LR
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iinqwelomoya zaseTurkmenistan zizimisele uku-odola iBoeing 777-200LR
Airlines • isikhululo • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Utyalo mali • iindaba • Iindaba Eziphambili ZaseTurkmenistan
I-Boeing kunye neTurkmenistan Airlines, umphathi wesizwe Turkmenistani, namhlanje sibhengeze isicwangciso senqwelomoya sokwandisa ukusebenza kwayo ixesha elide ngokudibanisa i-777-200LR yesine (Uluhlu oludeinqwelo moya kwizithuthi zayo.
Ukuzibophelela, okuxabisekileyo $ 346.9 yezigidi Uluhlu lwamaxabiso, luya kubonakala kwi-Order yee-Boeing nakwiiWebhusayithi xa igqityiwe.
I-Boeing 777-200LR lelona nqwelo-moya inde kwezona ntengiso zinde ehlabathini, ezikwaziyo ukudibanisa izixeko ezibini ezingamisiyo. Inoluhlu oluphezulu lwe-15,843 yeekhilomitha (8,555 nmi) kwaye ithwala abakhweli abaninzi kunye nemithwalo yempahla kude kunayo nayiphi na enye i-jetliner. I-777-200LR ixhotywe ngenjini enamandla ye-GE90-110B1L, kwaye inokuhlala ukuya kuthi ga kuma-317 abakhweli kulungelelwaniso lweeklasi ezimbini.
“I-777 yeyona injini yamawele iphumelele kakhulu emhlabeni, inqwelo moya ende, kwaye i-777-200LR yinqwelomoya elungileyo ukunceda iTurkmenistan Airlines ukuba ikhule ukusebenza kwayo kwilizwe liphela. iYurophu, Asia nangaphaya, ”utshilo Ihssane Mounir, usekela-mongameli omkhulu wentengiso kunye nentengiso yeNkampani ye-Boeing. "I-Turkmenistan Airlines kunye neBoeing bangamaqabane ukusukela ngo-1992 kwaye siwongekile ngokuqhubeka nokholo nokuzithemba kwabo kwiinqwelo-moya ze-Boeing."
I-777-200LR entsha iyakuba yinqwelomoya engama-32 ethengwe yiTurkmenistan Airlines esuka eBoeing. ETurkmenistan ophethe iflegi, esekwe kwi AshgabatIsebenza ngemodeli yenqwelomoya ezingama-737, 757 kunye nama-777. Inqwelo moya ihambisa abakhweli abamalunga nama-3,000 XNUMX mihla le elizweni kwaye phantse babe zizigidi ezibini abakhweli ngonyaka kwiindlela zayo zamanye amazwe nezasekhaya.
I-Boeing yeyona nkampani inkulu ye-aerospace kunye nomnikezeli ophambili wenqwelomoya, ukhuselo, indawo kunye neenkqubo zokhuseleko, kunye neenkonzo zehlabathi. Inkampani ixhasa abathengi kurhwebo nakurhulumente kumazwe angaphezu kwe-150. I-Boeing iqeshe ngaphezulu kwe-150,000 yabantu kwihlabathi liphela kwaye iphakamise iitalente zesiseko sabanikezeli behlabathi. Ukwakha kwilifa lobunkokheli be-aerospace, i-Boeing iyaqhubeka ukukhokela kwitekhnoloji kunye nokuyila, inikezela abathengi bayo kwaye ityale imali kubantu bayo nakukhula kwexesha elizayo.